आजबाट मलमास अर्थात अधिकमास सुरु ! यि कामहरू गर्दै नगर्नुस !
प्रकाशित मितिः आश्विन 2, 2077
काठमाडौं । अधिकमास अर्थात् पुरुषोत्तम मास आज (शुक्रबार) देखि सुरु भएको छ । असोज २ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म मलमास चल्नेछ । एक चान्द्रमासभरि कुनै पनि शुभकर्म गर्न नमिल्नेगरि सुरु भएको पुरुषोत्तम मासकै कारण यस वर्षको दशैं-तिहार पछि सरेको छ भने सोह्रश्राद्ध केही अघि सरेको छ ।
हिन्दु पञ्चाङ्ग अनुसार सौरमासको एक वर्षमा ३६५ दिन, १५ घडी, ३१ पला र ३० विपला हुन्छ जब कि चन्द्रमान अनुसार ३५४ दिन, २२ घडी, १ पला र २३ विपलाको एक वर्ष हुने गर्छ । हरेक वर्ष सूर्य तथा चन्द्रमासको बीचमा हुने १० दिन ५३ घडी, ३० पला एवं ७ विपलाको अन्तरले महिना छोएपछि एक महिनालाई अशुद्ध मास मानेर गणना नगरी सौरमाससँग समायोजन गर्ने गरिन्छ । यही अशुद्ध भनिएको महिना नै मलमास हो ।
मलमासलाई पुरुषोत्तम मास पनि भन्ने गरिन्छ । यसको छुट्टै किंवदन्ती रहेको छ । हरेक महिनालाई सबै भगवानले आ(आफ्नो अनुकूल मिलाएर स्वीकार्न थालेपनि अन्तिममा अशुद्ध भनेर छाडिएको यो महिनालाई कुनै पनि भगवानले स्वीकार्न चाहेनन् । यसै पनि अशुद्ध भनेर छाडिएको यो महिनाले भगवानहरूसँग विलौना गरेपछि पुरुषोत्तम अर्थात् भगवान विष्णुले सो महिनाको नाम नै आफ्नो नामबाट राखेर सो महिनालाई आफूले स्वीकार्ने बताए भन्ने मान्यता छ ।
मलमासमा मन्दिरलगायत भौतिक संरचना निर्माणको लागि समेत निषेध गरिएको छ । शास्त्रीय मान्यता अनुसार यो एक महिनाभरि कुनै पनि नयाँ शुभकर्मलाई शुभारम्भ गर्न नै निषेध गरिएको छ । यद्यपि यो समयमा समेत पहिलेदेखि नियमित गरिँदै आएको कर्म गर्न भने बाधा नपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
के गर्न हुने के गर्न नहुने
– नित्य कर्म
– नियमित गरिँदै आएको व्रत
– निस्काम भावले गरिने बिहानी सत्संग
– विष्णुको स्तुति र कीर्तन
– न्वारन, पास्नी
– दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद
– कुनै पनि काम्य गर्म गर्न हुँदैन
– मुहूर्त जुराएर गर्ने काम केही पनि गर्न हुँदैन
– नयाँ तीर्थको यात्रा गर्न
– नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न
– नयाँ व्रतको सुरुवात गर्न हुँदैन
– नयाँ संरचना निर्माणको थालनी